Banyere Anyị - Xuzhou Lena Import Export Co., Ltd.
Xuzhou Lena Import na Export Co., Ltd., onye na-emepụta karama iko ahaziri iche na China, nwere ihe karịrị afọ 12 na-enye ihe ngwọta nkwakọ ngwaahịa iko.
Anyị na-enye karama iko dị iche iche, dị ka karama ihe ọṅụṅụ, karama ihe ọṅụṅụ, karama mmiri ara ehi, karama condiment, karama ịchọ mma, karama aromatherapy, karama mmanụ dị mkpa, ihe mkpuchi kandụl, ite mmanụ aṅụ, ite jam, kọfị kọfị, ite nchekwa nri, wdg. .
Anyị nwere otu ndị na-emepụta ihe pụrụ iche nke nwere ike ịmepụta karama nkwakọ ngwaahịa ịchọrọ dịka echiche gị si dị.Anyị na-asọpụrụ ma na-akwado mmalite ma gbanwee echiche gị ka ọ bụrụ eziokwu.Kedu ihe anwansi nke a ga-abụ.
Ngwa ngwa iko anyị emeela nyocha nke ọma, na-agbaso ụkpụrụ mba na mbupụ, yana nyocha nkwado.N'otu oge ahụ, ngalaba mmepụta anyị nwere usoro njikwa mmepụta zuru oke iji chịkwaa ọnụ ahịa nke ọma mgbe ị na-achịkwa àgwà ka ị wee nwekwuo oke uru gị.
Companylọ ọrụ anyị nwekwara igwe decal eletrik niile maka ime nhazi miri emi maka karama iko.Usoro anyị miri emi gụnyere decal, silk screen printing, hot stamping, frosting, sandblasting, paint and electroplating, etc. OEM na ODM order is welcome, anyị nwere obi ụtọ ịmepụta ma ọ bụ mepụta karama omenala gị, kpọmkwem otu echiche gị na ịbịaru.Ihe anyị chọrọ ime bụ ịnye enyi ọ bụla ọrụ nkwụsịtụ.
Ndị otu ahịa mba ofesi anyị nwere nkà nzikọrịta ozi mara mma ma nwee ike ịghọta ezigbo nchegbu nke ndị ahịa anyị.Mgbe ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike gasịrị, anyị na ndị ahịa anyị na-enwe mmekọrịta dị mma ma nweta ntụkwasị obi ha n'ụwa.
Anyị nwere ntụkwasị obi na ngwaahịa anyị ma nwee ike ịnye ihe nlele n'efu maka nyocha gị.Ebupụla ngwaahịa iko anyị na mba na mpaghara 100 gburugburu ụwa.
Mmadụ Bịa ka anyị factory ileta na kpakorita.